NHAZI SYSTEM MAKA NKEWA 2 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Bipụta usoro chọrọ maka egwuregwu ahụ Nkeji 2
Studio Ubisoft kọwara n'ụzọ zuru ezu usoro chọrọ maka egwuregwu ahụ Nkeji nke 2.
Ndị mmepe bipụtara aha nke components maka egwuregwu ahụ na 1080p na 30 na 60 FPS, yana maka egwuregwu nke 60 FPS na 1440p na 4K-mkpebi.
Ndị na-eme egwuregwu ga-eji Windows 7 na nke ọhụrụ. Maka ugboro 30 nkeji na foto Full HD, AMD FX-6350 ma ọ bụ Core i5-2500k dị mma dịka nhazi. Ha na ha nwere ike ịbụ kaadị vidiyo GTX 670 ma ọ bụ R9 270 si na Radeon. RAM dịkarịa ala 8 GB.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe akara kachasị mma nke 60 FPS na Full HD, wee kwadebe ihe ndị ọzọ n'oge a: Ryzen 5 1500X ma ọ bụ Core i7-4790 na nkwado nke RX 480 na GTX 970 na 8 GB nke RAM. Maka ezigbo egwuregwu na ultra-hd, ị chọrọ R7 1700 ma ọ bụ ihe nhazi site na Intel i7-6700k, yana RX Vega 56 ma ọ bụ GTX 1070 na 16 gigabytes nke RAM. 4K egwuregwu ga-achọ ike kachasị: R7 2700X ma ọ bụ i9-7900X na Radeon VII kaadị vidiyo na RTX 2080 TI.
A na-atụ anya mmalite nke Division 2 na March 15 na ntaneti egwuregwu niile.